November 2021 - YATHAZONE
“ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားများခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ” နေ့စဉ်နေ့စဉ် ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါးကို ပွားများရတယ်။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပွားများရင် ဘုရားဓာတ်တွေ တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ် ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းလာတယ်။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းတော့ ဘုရားရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော်တွေလည်း တဖြည်းဖြည်းကူးလာတယ် ဘုန်းဘုန်းတို့ နှစ်သစ်အချိန်အခါက ကာလ တစ်နှစ်ပြောင်းသွားတော့ သိပ္ပံနည်းအရ နေက ဟိုးဒက္ခိဏ အရပ်ကနေ တဖြည်းဖြည်း ရပ်ပြီးတော့ ဒီဘက်ပြန်ပြောင်းလာတာကို နှစ်သစ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ ကမ္ဘာကြီးက နေကို ပတ်လှည့်နေတာ။ အဲဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတွေ၊ နတ်တွေ၊ ဗြဟ္မာတွေ၊ သစ်ပင်တောတောင် ရေမြေတွေလည်း ဥတုအလိုက် နေရဲ့အပူရှိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ ပြောင်းကြတယ်။ အဲဒီလိုပြောင်းသလို သက်ရှိသတ္တဝါတွေက ဘာပြောင်းရလဲဆိုတော့ အကောင်းဆုံးက နှစ်သစ်မှာဘုရားဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ် မေတ္တာပွားတာ …
တညလုံး ဖဲရိုက် ပြန်လာတာတောင် အိမ်က မိန်းမက ထိုင်ရှိခိုးရတဲ့ မောင်ခွေးရဲ့ အကြံ အကြံပိုင်သော မောင်ခွေး ည ၉ နာရီလောက် လင်မယား၂ ယောက် အိမ်ပြန်ကြတော့ လမ်းတစ်ဝက်မှာ မျက်နှာဖုံးစွတ်နဲ့လူ ၄ယောက် ထွက်လာ ပါတယ်… ဓါးကိုစီကိုင်ထားပြီးတော့.. ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူလို့ ထင်ရတဲ့သူက… “လက်မြှောက်ထားပါ အော်မယ်မကြံနဲ့…. ဓါးကမျက်စိမပါဘူး… မင်းတို့ ၂ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်နေခဲ့ရမယ်… ပြန်ပေးဆွဲတာပါ.. ရဲတိုင်ရင်တော့ အလောင်းလာကောက်ရမယ်… ဘယ်သူ နေခဲ့မလဲပြော… “ယောင်္ကျားဖြစ်သူက ချက်ချင်း ရင်ကိုကော့ကာ….“ကျွန်တော်နေခဲ့မယ်…. မိန်းမကို ပြန်လွတ်ပေးပါ…. မိန်းမ မင်းအိမ်ပြန်နှင့် ရဲမတိုင်နဲ့နော်…. ငါသူတို့နဲ့ ညှိနိုင်းပြီး ဖုန်းပြန် ဆက်မယ်…” မိန်းမဖြစ်သူ ပြန်သွားသောအခါ …
Total views : 688443